खाद्य सामग्री वितरण नया शैली : चौरमा पोको, आफैं बोक्ने हिँड्ने ! – Khabarhouse
खाद्य सामग्री वितरण नया शैली : चौरमा पोको, आफैं बोक्ने हिँड्ने !
Khabar house | २२ चैत्र २०७६, शनिबार ०५:४२ | Comments
बारा : निजगढ नगरपालिका–८ खयरघारी स्थित बकैया ठाकुर आधारभूत विद्यालयको चौरमा १५० वटा पोका सजाएर राखिएको छ। हेर्दै आकर्षक लाग्ने गरी चौरभरि छुट्टाछुट्टै पोकाको सबै भन्दा मुनि चामलको बोरा छ। त्यसमाथि दाल, तेल नुन र साबुनका प्याकेट राखिएको छ। विद्यालयको प्रवेशद्वारबाट छिर्नेबित्तिकै पश्चितर्फ खानेपानीको धारो छ, धारोमा हात धुन साबुन राखिएको छ।
त्यसभन्दा पछि ग्लप्स राखिएका छन्। को;रोना भाइरसको जो’खिमलाई ख्याल गरेर अपनाइएको सतर्कर्ता हो । निजगढ–८ को एकमात्र सामुदायिक वन बकैया नागमणि सामुदायिक वन समूहले आफ्ना विपन्न परिवारका उपभोक्ता लाई खाद्य सामग्री वितरण गर्न अप नाएको मोडल हो। समूहमा आवद्ध उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ।
समूहले वर्गीकरण गरेको चारवटा वर्गमध्ये घ वर्गमा उपभोक्ता विपन्न अवस्थाका छन्। को;रोनाको संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर सरकारले लकडाउन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका उपभोक्ता लाई भोको पेट बस्न नपरोस् भनी समूहले खाद्य सामग्री वितरण गर्न सुरु गरेको बकैया नागमणि सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष रविराज दंगाल बताउँछन्।
‘समूहको आम्दानीको ३५ प्रतिशत विपन्न उपभोक्तालाई खर्च गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था गरेको छ’ अध्यक्ष दंगालले भने, ‘घरबाट निस्केर काममा जान नपाउँदा समस्यामा परेका उपभोक्तालाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ।’ खाद्यन्न वितरणलाई संक्रमणबाट जोगाउन समूहले नमुना विधि अपनाएको छ। उपभोक्ताको घर–घरमै अघिल्लो दिन नै टोकन स्वरुप चिट्ठी पठाइएको थियो।
भिडभाड नहोस् भनेर चिट्ठीमा खाद्यन्न लिन आउने समय नै फरक–फरक राखेर पठाइएकाले भिड भाड विनै खाद्यन्न वितरण भएको स्थानीय शालिकराम ढुंगानाले बताए । खाद्यन्न लिन आउनेलाई मास्क अनिवार्य गरिएको थियो। वितरण गरिने स्थलमा पुगेपछि साबुन पानीले हात मिचिमिचि धुने व्यवस्था मिलाइएको थियो। हात धोएपछि एक पटकमा तीनजना फरक–फरक गोलो घेरामा उभिएर भरपाई भर्ने ठाउँमा पुग्छन्।
परिचयपत्र र कुपन बुझाएपछि भरपाई गराइन्छ। समूहले हातमा लगाउन ग्लप्सको व्यवस्था गरेको छ। राहतको नाममा फोटो खिच्ने फेसन चलेको छ। तर यहाँ कसैले सामान हस्तान्तरण गर्दैनन्, आफैंले बोकेर लाने भएपछि फोटो खिचाउन पोज दिइरहनु परेन्। यहाँ न राहत लिनेको भिडभाड छ, न दिनेको नै फोटो खिचाउन प्रतिस्पर्धा देखिन्छ।